Soo dejisan Comodo 8.2.0.4792 AntiVirus, Internet... – Vessoft
Soo dejisan Comodo
Comodo – xirmo ah software anti-virus si ay u ilaaliyaan aad computer. software The ilaaliya nidaamka ka dhanka ah fayrasyada, kolkaasaa dirxi galay, Trojans, spyware iyo hanjabaado kale. Comodo waa inay awoodaan inay ilaaliyaan tiirka user ee internet-ka isla markaana eegaya baabuurta network for hanjabaad suurtagal ah. software ka kooban module gaar ah si loo ogaado waxqabadka laga shakiyo iyo hubi qaybaha of socda codsiyada walxaha xaasidnimo. Sidoo kale Comodo kuu ogolaanayaa inaad isku xiro daro ah reserved iyo tayadoodii nidaamka.
Ilaalinta fayrusyada, kolkaasaa dirxi galay, Trojans iyo spyware
Hubinta ee gaadiidka shabakadda
Monitoring dhaqdhaqaaqa codsiga
Go'doon ah files laga shakiyo
Comments on Comodo:
Comodo Software la xiriira:
English, Українська, Français, Español... Eset 8.0.319.0 Smart Security iyo Nod32
العربية, English, Français, Español... ComboFix 16.10.17.1